काेराेना सं*क्रमणका कारण संसारकै ख*राब मुलुकको सूचीमा नेपाल कति स्थानमा ? – Butwal Sandesh
काेराेना सं*क्रमणका कारण संसारकै ख*राब मुलुकको सूचीमा नेपाल कति स्थानमा ?
काठमाडौं। काेराेना भाइरस (कोभिड १९) का कारण संसारका खराब मुलुकको सूचीमा नेपाल ७० औं स्थानमा उक्लिएको छ। उज्वेकिस्तान र आइभोरी कोस्टलाई पछि पारेको नेपालले हिजो ५ सय ८६ सं*क्रमित थपिएको थियो।
हिजोसम्म नेपालमा ७ हजार १ सय ७७ जना सं*क्रमित भेटिएका छन्। ४७ जना आज बिहानमात्र नयाँ सं*क्रमित गण्डकी प्रदेशमा फेला परेका छन्। यससहित ७ हजार २ सय २२४ जना सं*क्रमित रहेका छन्।
बुधबार एकैदिन नेपालमा ५ सय ८६ जना कोरोना सं*क्रमित थपिएका छन्। जसमध्ये ४० जना महिला र ५४६ जना पुरुषमा सं*क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नयाँ थपिएका सं*क्रमितहरु उदयपुरका ४, सिराहाका १, मोरङका ९, झापाका २, धनुषाका २६, महोत्तरीका २००, बाराका ७, रौतहटका १३७, कपिलवस्तुका १०, रुपन्देहीका ७, सर्लाहीका ६, प्युठानका ३४, अर्घाखाँचीका १२, कैलालीका १, पर्वतका ३, नवलपरासीका १७, गुल्मीका २६, बाँकेका १, बर्दियाका ३१, दाङका ८, सल्यानका २५, सुर्खेतका २, दैलेखका २, कालिकोटका १४ र कञ्चनपुरका ७ जना रहेका छन्।
यस्तै कोरोना भाइरसको सं*क्रमण बुधबार थप ९ जना सं*क्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। योसँगै कोरोना भाइरस सं*क्रमण निको भएर घर फर्किनेका १ हजार १ सय ६७ पुगेको छ। तीमध्ये १ सय १२ जना महिला र १ हजार ५५ जना पुरुष छन्।
सं*क्रमितको संख्या अहिलेकै रफ्तारमा जाने हो भने आज नेपालले अस्ट्रेलियालाई पनि खराब मुलुकको सूचीमा पछि पारेर अग्रता लिनेछ।
नेपालभन्दा एक तह माथि रहेको अस्ट्रेलियमा सं*क्रमितको संख्या ७ हजार ३ सय ९० छ। तर, अस्ट्रेलियामा सं*क्रमितको संख्या बढ्ने दर नेपालभन्दा धेरै कम रहेको छ। त्यसैले यो सूचीमा नेपालले अस्ट्रेलियालाई आज उछिन्ने छ।
दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने भारत शीर्ष स्थानमा छ। भारतमा ३ लाख ६७ हजार सं*क्रमित रहेका छन्। दोस्रो स्थानमा पाकिस्तान छ। पाकिस्तानमा सं*क्रमितको संख्या १ लाख ५४ हजार ७ सय ६० जना सं*क्रमित छन्।
बंगलादेशमा ९८ हजार ४ सय ८९ जनामा सं*क्रमण देखिएको छ। त्यसपछि सं*क्रमणको उच्च दर अफगानिस्तानमा रहेको छ। अफगानिस्तानमा २६ हजार ८ सय ७४ जना सं*क्रमित छन्।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा मालदिभ्समा २ हजार १ सय २० जना सं*क्रमित छन् भने श्रीलङ्कामा सं*क्रमितको संख्या १ हजार ९ सय २४ रहेको छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम सं*क्रमण भुटानमा रहेको छ। त्यहाँ ६७ जना सं*क्रमित भेटिएका छन्।